Etu esi egbochi ọwa YouTube na usoro ole na ole | Akụkọ akụrụngwa
Mgbe ị ga-edebanye aha na chanel YouTube, ị nwere ike ịnọ na-eche maka akụkọ naanị site na ebe ahụ karịa karịa, site na ndị dị iche iche nke nwere ike iwe oke. N'ihi ọnọdụ a, ọtụtụ mmadụ anwaala ụzọ igbochi ọwa YouTube nke na-adịghị amasị gị, nke a na-enyemaka nke plugins ma ọ bụ tinye-ons nke enwere ike itinye na ihe nchọgharị Internetntanetị.
N'ụzọ dị mma, Google echewo banyere ọnọdụ a maka abamuru nke ndị ọrụ ya, ya bụ, na-enweghị mkpa ịwụnye ngwa ndị ọzọ na ihe nchọgharị anyntanetị ọ bụla, mmadụ nkịtị nwere ike iru - gbochie otu ọwa YouTube, ma ọ bụrụ na ị na-atụle na ọ na-egosi ọtụtụ ugboro dị ka aro; Site na obere aghụghọ n’isiokwu a anyị ga-ekwupụta ụzọ ziri ezi iji wee gbochie otu n’ime ọwa YouTube a (ma ọ bụ ọtụtụ karịa) ka ha wee ghara ịpụta na ntụnye ndị ụzọ ahụ na-enye.
1 Etu esi egbochi ọwa YouTube achọghị
2 Gini kpatara igbochi ọwa na YouTube?
Etu esi egbochi ọwa YouTube achọghị
Ọ dị ezigbo mkpa ka ị cheta usoro anyị ga-atụ aro n'okpuru ebe a, ebe ọ ga-adabere na ma ị ga - enwe ike igbochi ọwa YouTube ndị na-akpasu iwe ma ọ bụ wute gị; Iji mee nke a, anyị ga-atụ aro otu ihe atụ nke nwere ike ịbụ ọnọdụ nke ọtụtụ:
Mepee ihe nchọgharị Internetntanetị.
Banye na akaụntụ YouTube gị.
Choo vidiyo YouTube nke nyere gi nsogbu.
Pịa na aha onye nwe vidiyo ahụ.
Site na usoro anyị tụrụ aro n'elu, anyị ga-ahụ onwe anyị ozugbo na ibe nke ọwa YouTube nke onye tinyela vidiyo ahụ anyị achọghịzị ịhụ. Ihe niile anyị kwesịrị ime n’ebe a bụ ịga na taabụ nke na-ekwu «Ihe".
Mgbe nke ahụ gasịrị, anyị ga-eme ya pịa na ọkọlọtọ nta na-emi odude kwupụta n'aka ekpe nke drawer na-ekwu «Send ozi».
A usoro nke nhọrọ ga-apụta ozugbo, nke anyị ga-enwe họrọ iji "gbochie onye ọrụ"; Usoro ahụ nwere ike iwe obere oge, ọ bụ ezie na ị ga-ejide n'aka na mgbe e mesịrị vidiyo ahụ wee kwuo chanel YouTube agakwaghị apụta dị ka aro oge ọ bụla ị na-agagharị na akaụntụ gị.
Gini kpatara igbochi ọwa na YouTube?
Enwere ọtụtụ ọdịnaya na YouTube, mana anyị ekwesịghị inwe mmasị na ihe niile. Ọ bụrụ na ọ bụla youtuber Karịsịa ị nweghị mmasị ma ọ bụ enweghị mmasị na ọdịnaya ya, ịnwere ike igbochi ya ma ị ga-akwụsị ịhụ ya na ndepụta vidiyo gị.
I nwekwara ike igbochi otu ọwa YouTube dị ka ihe ọzọ nke njikwa ndị nne na nna. Ọ bụrụ na ọwa ọ bụla na ikpo okwu na-ewere dị ka Ezigbo ezinụlọ ma ị dịghị amasị ya ọdịnaya maka nwa gị, ị nwere ike mgbe niile na-egbochi ndị YouTube ọwa na ị na-ewere na-ekwesịghị ekwesị maka ya.
Gwa anyị ma ọ bụrụ na ịnwee iji mmachi ọwa a na YouTube ma ọ bụ ụzọ ndị ị na-eji kwụsị ikiri ọdịnaya site na ọwa ahụ? youtuber gịnị na-amasị gị
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Gbochie Channels YouTube
Ọ bụ naanị ihe m na-achọ. E nwere otu nwoke a na-apụghị ịgbagha agbagha nke nwere ọtụtụ ọwa ọjọọ. Amaghị m ihe kpatara enwere ndị chere na ha nwere ike ime YouTube ihe ọ bụla ha chọrọ. Daalụ nke ukwuu.
oh, anyi bu otu, nsogbu m bu nke nwoke nke n’akpo onwe ya sesal
Zaghachi Héctor Hanibal Martinez
Hugo Garcia Sandoval onye nhazi ihe oyiyi dijo
Nhọrọ a na-egbochi nke na-apụta dị ka ntụnye, mana ọ bụrụ na m chọọ ya ma vidiyo ya pụta, nri?
Ihe na-eme bụ na nwanne m nwoke, obere afọ 6, na-ahụ otu nwoke nke bụ nwoke jọgburu onwe ya na-ekwu ọtụtụ okwu ọjọọ, achọghịkwa m ka ọ nọgide na-ele vidio ndị ahụ. Kedụ ka m ga - esi gbochie ya nke mere na ọbụlagodi na - achọ ya, ọ na - apụta na nchọta ahụ?
Zaghachi Hugo Garcia Sandoval
Ndewo, gbaghara ... you chọtara ụzọ nwanne gị nwoke nke obere enweghị ike isi lelee ụdị vidiyo ahụ? Otu ihe ahụ na-eme m, obere nwanne m nwoke dị afọ 6 na-ele vidio na-adịghị mma ma ọlị maka ọgbọ ya na enweghị m ike ịchọta ụzọ maka vidiyo ndị ahụ agaghị apụta
Tube tube naanị na-enye google plerfiles n'oge ahụ, usoro ahụ anaghị arụ ọrụ, ebe ọ bụ na profaịlụ ndị ahụ enweghị ohere igbochi.
Ọ bụrụ na nwa nwanne m nwoke na-ekiri vidiyo nke otu Fernandofloo ma ọ bụrụ na m rere ure n'ihi na emesịa ọ na-ekwu okwu dị otú ahụ ma ọ jọgburu onwe ya, ọ dịghị ihe na-eme, vidiyo ahụ na-apụta
Abali oma, otu ihe a mere mụ na ada m, mana esoro m ntuziaka, ihe mbụ ị ga - eme bụ ịbanye ọwa ịchọrọ igbochi. Dịka ọmụmaatụ, nke a bụ ibe m gbochiri
Home Videos Ndetuta egwu ọkpụkpọ Channels Comments More ozi
ebe ọ na-ekwu ozi ndị ọzọ ị pịrị ma gosipụta ọkọlọtọ ebe ha nyere gị nhọrọ igbochi onye ọrụ
Obere ọkọlọtọ nwere obi ụtọ apụtaghị ... achọkwara m igbochi ya n'ihi na nwa m nwoke dị afọ 9 na-ele vidio ụfọdụ nke na-eyighị ka ọ dabara maka afọ ya ... nke ụdị rụrụ arụ ... ọ dị onye maara Kedu? Daalụ.
Ka ọkọlọtọ wee pụta, ị ga-ebu ụzọ mepee nnọkọ na YouTube; Nhọrọ ọzọ bụ iji ọnọdụ amachibidoro, ị ga-aga na ala nke ibe YouTube, lelee igbe mode amachibidoro Ee ma nye ya nchekwa, ebe ọ na-egosi ebe ahụ, ọ bụghị adighi agha agha ma ọ bụrụ na ọ na-egbochi vidiyo ndị a na-ewere na ha ekwesịghị (mmekọahụ, okwu mkparị, wdg,).
Ka m na-emechi nwa nwoke a rụrụ arụ, nwa m nwoke dị afọ 9 na-etinye oge ya niile na-ele vidio ndị a, nke na-adịghị arụ ọrụ ma ọ bụ agụmakwụkwọ.
Ndewo ekele mana m gbasoro usoro a ma mara na ogologo oge gara aga, emechiela m onye ọrụ ahụ na-emechaghị m chọọ igosipụta maka nwa m nwoke OSEA NA-AH D M KWES UNR WITH KWESLR AND NA Ọ B IR THAT M. Oge obula ha ka gosiputara ... O DERE NA YouTube adighi enwe mmasi inye aka na MENIS nne na nna nke umuaka iji wepu egwu nke egwu site na ngbako….
Ọ B IFR SOM na onye ọ bụla maara ụzọ dị mma iji gbochie chanel, biko mara na ọ bụ ihe dị mma n'ihi na oge na-aga site na ịzụlite ụmụaka na nwa okorobịa a, onye na-eche echiche na-echeghị banyere ihe ọ bụla ị nọ na nde ụmụaka, na-etinye isi gị. Ekwela ka ị hụ ya mana njedebe adịghị mfe, maka oge m nwetara ya mana ụmụ nwoke niile nke afọ gị na-ele ya mgbe ahụ m na-ahụ na ịgbachi chanel ahụ ga-eme ka nsogbu ahụ dị ugbu a. M. EGO N'AFỌ NA Ọ GA-EWU ỌR RRAL N'ALLỌ NCHE A NA-AKPỌR H HM H MMAD ??? ????
SIRBE NKE IWU ENGW D IWU ỌRM ND SOM …FỌD……. Ejiri m vidiyo nke nwa m nwoke 9 dị afọ ebe ọ kwenyere na ọ bụ onye na-eme ihe ngosi ma ọ bụ nkwupụta okwu ọjọọ na-apụta site na ndị na-adịghị ọbụna na-ekpuchi vidiyo naanị na-enyefe ụmụ. AS "PANDA BDA OBI "TỌ", na-agwọ nwa m nwoke nke nwoke nwere mmasị nwoke ma na-arịọ ya ka o gosi ya SCROTUS, Naanị m na-agụ ihe niile mana ndị a raara nye ka a kpọpụ ya na Youtube.
ka anyị lekọta ndị aka ha dị ọcha dijo
Daalụ, mana ọ naghị arụ ọrụ. Emechiela ya mana YouTube na-aga n'ihu na-enye nwa m vidiyo nke onye na-arịa ọrịa a.
Zaghachi iji lekọta ndị aka ha dị ọcha
Shanon abla dijo
Nhọrọ kachasị mma bụ ibudata vidiyo dị mma na folda na kọmpụta ma kwụpụ ịntanetị nke na-abịa naanị ọnụnọ anyị ... ma ọ bụ tinye okwuntughe na kọmputa ...
Zaghachi Shanon abella
Ekwadoro m onye ọ bụla na mgbe ha gbochiri ọwa ọ bụla na-agakwa n'akụkọ ihe mere eme wee hichapụ ihe niile ruo mgbe akụkọ nyocha m na-atụ anya na ọ ga-agara ndị niile mma
Daalụ, m mere ya na kọmputa, enwere m olileanya na ọ rụkwara ọrụ na egwuregwu egwuregwu PlayStation 3, n'ụlọ m ga-enyocha ya. Ọwa mmanụ oroma na-eme ka m daa, akụkụ egwuregwu ahụ, ha na-eme ihe ike na nwa m nwoke 3 na-ele ha anya site na ntụnye, enwere m olileanya na ha apụtaghị ugbu a.
Achọrọ m ma chọọ na njedebe m gbochiri ya na firewall, ọ bụ ihe ihere na YouTube juputara na apes na-eti mkpu ma na-ada ụda mgbe ha na-edekọ onwe ha egwu ma ọ bụ bụrụ onye nzuzu.
Mepee ihe eji egwuri egwu, ihe ndi ozo, rie nri, ihe ochi, ihe ndi ozo ... ma karia ime ka umuaka anyi mara ma kuziere ha okwu ojoo na uzo isi mepe ego ole na ole.
Alexis Arroyo onye nhazi ihe oyiyi dijo
Nwa uwa ojoo obula diri umuaka nile
Zaghachi Alexis Arroyo
Robert Cunningham Madrigal kwuru dijo
Ekwesịrị m igbochi ọwa ụmụ okorobịa a, ha na-ekwu okwu rere ure, ha na-ekwu okwu rụrụ arụ mgbe niile na obere nwa m nwoke, ka ọ na-ahụ ha ka ha na-egwu egwuregwu vidio, na-eche na nke ahụ adịghị njọ. Ọ bụrụ na onye ọ bụla maara otu esi egbochi ya na android, m ga-enwe ekele dị ukwuu ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịgwa m, daalụ.
Zaghachi Robert Cunningham Madrigal
Ndewo .. M jisiri ike gbochie ọwa ndị m na-achọghị ka ụmụ m hụ site na iji ndọtị na google Chrome: videoblocker. Ha wụnye ya, ha gaa YouTube chọọ chanel ahụ ha achọghị ịhụ, ha ziri ezi pịa na oke na aha channelụ ahụ wee pịa ebe ọ na-ekwu "block videos from this channel". Echere m na ọ ga-ejere gị ozi! ọ baara m uru n'ezie ..
Zaghachi Paula Castañeda
M ga-enyere gị aka ọ bụla, rịba ama, gbalịa inweta nhazi nke okporo ụzọ gị, ọtụtụ ụzọ dị iche iche nwere ikike nne na nna, kpọchie aha chanel ahụ, a gaghị ahụkwa chanel ahụ na ngwaọrụ ha niile.
Zaghachi na N3
lụrụ ọgụ dijo
Mmasị, na-egbochi ọwa na-enweghị nanị mode, enweghị m nsogbu na fernanfloo, ma na regeton, m na-adịkwaghị eji google chrome mgbe Alexa virus, ugbu a, m na-eji Edge na ọ na-enweghị BlockSite ndọtị (na-atụ aro maka ndị na-eji chrome) ma ngọngọ si rawụta ?? Achọpụtara m mgbe m lara n'ụlọ, amaara m na site na faịlụ ndị ụsụụ ndị agha ọ gaghị ekwe omume ma echere m na site na windo windo ma ọ bụ, naanị abụọ a na-egbochi YouTube kpamkpam
Zaghachi ka m na-alụ
nke a anaghị arụ ọrụ echere m na ọ dị ka nke ahụ mgbe m hụrụ ya mana, nke ahụ na-egbochi onye ọrụ ịza ajụjụ na vidiyo gị, ọ naghị egbochi gị ịhụ ya
sasselandia anaghi aru oru adighi egbochi ya amaghi m maka na youtuber obula enwere ike igbochi ma sasselandia adighi?
Usoro a anaghị arụ ọrụ, kedu ihe ọzọ, echere m na n'ọchịchị ị nweghị ike igbochi ọwa YouTube ọ bụla, naanị nkwupụta na-egbochi, ọ nweghị ihe ọzọ, YouTube n'onwe ya na-agwa gị n'oge igbochi. Echere m na ọ ga-ewepụta ego ego maka Google, ọwa YouTube egbochiri na-akpọsa na onye ọrụ anaghị ahụ, mgbasa ozi bụ ego, yabụ Google agaghị emegide ọdịmma nke ya, nke bụ ihe ihere. Enwere otutu ọdịnaya na ọwa nke m ga-eji ọlyụ gbochie n'oge ndụ m niile, agbanyeghị, n'ụdị igbochi ọdịnaya a ugbu a ga-aga n'ihu ịpụta anyị.
M BORROR M NA TTUBT ME NA-AD MER ME M A IWU CHANEL A Kpọrọ "VISUALPOLITIK" Nke SITE NA SPANISH RIGHTSHERS LAMECULOS SITE NA United States, KWESER,, N'AGBANYERE Ọ NA-AD ME NA M DERE. Ọ D ME M KA M IME ANB MYGH MY ECHICHE M, GHỌTA, GOOGLE NA-EWERE CHANNEL ndị a dị ka ụzọ isi na-akwado, KWES ,R THE KWESANNR CH KWES RR L KWESECR FOR KWES FORR FOR KWES FORR THE HA.
Zaghachi ANDRES COSTA
Daalụ nke ukwuu!! n'ime peeji niile m chọrọ naanị nke a nwere azịza ziri ezi!
Ogologo ndụ iPod Nano na Shuffle, Apple kwụsịrị ire ha
Meizu PRO 7: ma oburu na inweghi otu ihuenyo, were abuo